पांच आना कुरा Archives - Page2of 30 - Khabar Japan - News in Nepali
हिन्दू धर्मलाइ अन्धविश्वास, ढोगी, पाखण्ड, सैतान भन्नेहरू लाई प्रश्न ?
Tags: hinduism, in-odd, questions, religions
खबरडेस्क,६ चैत । १) नासाका वैज्ञानीकहरुका अनुसार सुर्यबाट ॐ को आवाज आउछ कसरी? २) किन अमेरिकाले हिन्दूहरूको पवित्र गौमुत्रको patent अधिकार लिएर क्यान्सर जस्ता रोगको अौषधि बनाइरहेको छ जबकि हामीलाई गौमुत्रको महत्व हजार साल पहिलेबाट थाहा थियो । ३) किन… बाँकी अंश »
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला हिंसा अन्त्य नारामै सीमित, विभेद ज्यूँका त्यूँ
Tags: discrimination, featured, kathmandu, womenactivists, womenproblems, womensday, Womenviolence
काठमाडौँ, २४ फागुन । धनुषाकी ६० वर्षीया शारदा चौधरी ५० वर्षकी हुँदा श्रीमान् दिलीपको निधन भयो । श्रीमान्को मृत्युपछि चरम गरिबीले पिल्सिएको शारदाको परिवारलाई दुई छाक टार्नसमेत धौधौ भयो । यसैबीच शारदालाई गाउँलेले बोक्सीको आरोप लगाएर गाउँ निकाला गरिदिए ।… बाँकी अंश »
होली यसरी मनाउनुपर्छ
Tags: alert-news, celebratingholi, celebrities, holipurnima, in-odd
खबरडेस्क,१७ फागुन । हुन त होलीमा कुहिएको अन्डा अनि लोलाभित्र ढुंगा राखेर हान्ने गलत प्रवृत्ति छ । सभ्य र सरल तरिकाले होली खेल्नु राम्रो हुन्छ । मलाई काठमाडौंको होलीभन्दा तराईको होली बढी रमाइलो लाग्छ । – हिमाल सागर, गायक टीका… बाँकी अंश »